Izinqubomgomo eMpumalanga uhlala ekhaya ukucindezeleka njalo futhi noma ngasiphi isikhathi waxoshwa amandla iphakama kakhulu phansi. Emazweni ezwe elaliyi-USSR it is sahlanganisa emasikweni endala abameleli ngesilwane esifuywayo party. Abantu ezifana Abbas Abbasov biography iluphi okuzoxoxwa ngalo ngezansi, bafanelwe kakhulu ukunakwa, ngoba sezombusazwe uye wakwazi ukuba luthathe omunye okubaluleke okuthunyelwe kuhulumeni ngesikhathi ezine abongameli Azerbaijan. Bright ukugqama empunga mass nosaziwayo, aye waqongelela omningi nabangane, futhi izitha.
Biography Abbas Aydin oglu Abbasov iqala yayo Countdown 1949 Kirovobad Azerbaijan SSR. Ezemfundo wathola ngesikhathi Azerbaijan Agricultural Institute. Njengengxenye amaseshini zakusasa umfundi wakhetha enesizotha okukhethekile wezilwane.
Ngemva kokuqeda isikole esiphakeme ngo-1971, eseneminyaka ngokukholwa okuhle ukugcwalisa idiploma yabo Ministry of Ezolimo yase-Azerbaijan. Kube Abbas Aydin oglu Abbasov selingaphezu wezilwane omkhulu e-laboratory kazwelonke, sisebenze kuze kube ngo-1979. Khona-ke specialist abasha kuthembisa wamiswa okuthunyelwe loMkhandlu umqondisi Baku broiler endaweni yokukhanda.
Ngo-1982, lapho kufika i ezingalindelekile twist e biography of Abbas Abbasov. Ongowokuzalwa Azerbaijan idluliselwe Uzbekistan ezikude, lapho isesikhundleni nesekela usihlalo weKomiti phezu umkhakha yenkukhu weRiphabhulikhi.
Lapho kwakuphambana khona kwezinkathi
Ngo Uzbekistan, isikhulu sikahulumeni abasha Abbas Aydin oglu Abbasov wayebhekene nobunzima obukhulu. Ngo-1989 lwembula nezigameko eziningi zenkohlakalo nokusebenzisa kabi izimali kwempahla epulazini yenkukhu eningizimu yezwe. Bekanye namanye abantu abaphethe besezikhindini hit futhi wezilwane Azerbaijani.
Ngaleso sikhathi, maphakathi kwakuphuma amandla ezinyakaziswayo kakhulu, futhi kuningi kwakuxhomeke amakhanda republic. Inhloko Uzbekistan ngesikhathi kakade baba Islam Karimov. Ukuhlenga Countryman bakubo esisabekayo zindan elise-Asia Ephakathi, uMongameli Azerbaijan, Ayaz Mutalibov, mathupha ziqondiswe Karimov, sibambe ubuhlobo obuhle umngane wesikhathi eside. Ngakho Abbas Abbasov, owokuqala futhi okokugcina kwaba ezindaweni ejele, waphunyuka ukushaqeka okuncane.
Emuva e-Azerbaijan, owayeyisikhulu isiboshwa ephethwe i Absheron yenkukhu inhlangano ke ngo-1990 baba unobhala wokuqala wekomidi isifunda party Absheron wesifunda.
Isimo sokugxeka njengoba indlela zezombusazwe
Ayaz Mutalibov, umongameli wokuqala we-Azerbaijan, akazange bayakhohlwa ozithandayo yakhe nangemva republic ithola uzibuse, esimisiwe zangaphambili "fanciers Uzbek" State iKhansela. Ngesikhathi esifanayo Abbas Abbasov egijima ngempumelelo ephalamende, ngokuqinile kuthathwe indzawo yayo ukuphila kwawo ngokuqondene nezombusazwe yezwe.
Nokho Kirovobad ozalwa kwasekuqaleni ukubeka izifiso zabo, ngekhono elawula phakathi kwamabutho izinhlangano zezombusazwe ezihlukahlukene nokwenza imifelandawonye eziyinkimbinkimbi zezombusazwe. Wenqaba ukuhambisa kusukela labo ababengobhululu futhi njalo wayeqhutshwa zamanje kuleli zwe.
Kungokufanayo Ayas Mutalibov wenza ngobuhlanya kakhulu Abbasov, abamiswe ukuba ngo-1992 kuya yiPhini uNdunankulu weRiphabhulikhi iKhabhinethi. Nokho, lokhu akuzange kuvimbele inqubomgomo ushe cishe sokunikela abavikela zakhe zangaphambili esimweni nzima kuye. Cishe ezinsukwini ezingu-Esedabulile ekamu lakwa-betembusave Mutalibov futhi Elchibey waba umngane othembekile. Nokho, igalelo ngemuva umkhululi wakhe akuhlalanga e biography of Abbas Abbasov.
Eminyakeni embalwa kamuva Isekela uNdunankulu ezimisele ngokuthi afeze oda uMongameli wesithathu Heydar Aliyev waya eMoscow, lapho ayecashe ngenkathi Mutalibov zonke ukuthi zifune ukuqondiswa kusukela iziphathimandla zaseRussia lokuphindisela izeqamthetho lapho zenze le ahlaza owayeyinhloko isimo.
Permanent "grey cardinal"
Sezombangazwe Abbas Abbasov ubelokhu wayevelele phakathi ozakwabo Okuqukethwe akuzwakali kuhulumeni. Fine eyiqaphuqaphu, enamandla kuyisikhwele mlawuli, yadlula sibalo eziningi kasihlalo iKhabhinethi, lapho wasebenza iminyaka engaba ngu-nanhlanu edlule, uyasinda phakathi nalesi sikhathi wokubusa ezine omongameli. Nokho, isimo sokugxeka lakhe lezombusazwe, asikho isiqinisekiso sokwethembeka nesobungane makethe yokuthi Heydar Aliyev akazange alinge ukuphathisa izandla zakhe amandla kakhulu.
Ubelokhu ekhona ikhandidethi esiyinhloko sokuba undunankulu isikhashana ngisho ngokusemthethweni wakhonza njengephayona ikhanda iKhabhinethi, kodwa ngaso sonke isikhathi Aliyev akazange alivume icala esincintisana yingozi khulu eduze kwakhe.
Abasov wahlala lokuqala iPhini undunankulu indodana oshonile Geydara Alieva. Ilham futhi wanquma ukulishiya uhulumeni ngaphandle emthunzini umholi walo unomphela.
Ikakhulukazi le ngqungquthela nabaholi Azerbaijan Abbasov yaziswa kakhulu ngenxa yokuthi amakhono akhe zamanxusa. Wabhekisa amabombo Committee on Relations Inter-Ethnic, i-Committee on Economic Relations nge uthi ngabanye. Lokho sezombusazwe Abbas Aydin oglu Abbasov wakwazi ukufinyelela esivumelwaneni Yeltsin ukulondoloza ubuhlobo obuseduze Azerbaijan, naphezu ukungqubuzana zamanje phakathi oMongameli yeRussia ne-Azerbaijan.
Phela, ngalezo zinsuku kwaba ingxoxo yangempela ukwethulwa visa umbuso, ukuvalwa egcwele imingcele. Abbasov wakwazi ukukholisa Russian ubuholi rashness of enjalo isinyathelo, kodwa ngaphandle ukuthi futhi wakwazi ukuhlela mass supply Russian izikhali ukuze lizwe.
Vala ubungane "grey cardinal" we Yeltsin inkathi Berezovsky wamvumela ukusungula oxhumana nabo ebhizinisini Chechen futhi ngaphansi komhlaba. Kokusanhlamvu, metal, izinkampani zokuthutha - zonke lezi bakha ngokuya ihogela izithakazelo Iphini uNdunankulu, futhi waphumelela ibhizinisi lakhe siqu ngosizo Chechen kwamaqembu.
Ukunakekela inzalamizi kwenqubomgomo Azerbaijani
Ilham Aliyev akazange aphatheke izingozi futhi nizoqhubeka oqinile zezombusazwe sibalo kakhulu eduze real amandla. Ngo-2006 kwenzeka ukwesula unomphela Isekela uNdunankulu Abbas Abbasov. Banikezwe isikali izibalo, kwanqunywa ukuba ahlele inqubomgomo ukunakekelwa enhle. Kungenjalo, umongameli abasha weRiphabhulikhi babezifaka engozini ukuphikiswa athukuthele ngemva kwegceke lakwakhe. Abbas yena, yona, akazange lokubhikisha futhi wabonisa ukwethembeka okuphelele ngokumemezela yena nesosha ezithembekile republic, kanye umengameli ukuthi wayezimisele ukuba babuyele emsebenzini noma ngasiphi isikhathi.
Ukuhlala ekhaya Kwakuyingozi izitha eziningi kakhulu waqongelela sezombusazwe nezimiso nezimo. Wathuthela e-Moscow, lapho ngahamba ikhanda lakhe ibhizinisi. Ngo-2012, wabuyela ngokuphila yomphakathi futhi wahola Union omphakathi Azerbaijani Russia kanye ukuzimela Azerbaijanis kazwelonke-kwamasiko. Ngo-2016, Abbasov kwesokunxele kwababusi inhlangano yokugcina.
Circle ukugeza izingane: ngasiphi yobudala ukusebenzisa futhi kanjani ukuqala?
Biography emfushane Sviridov. Umculo befilimu "isiphepho esikhulu seqhwa"